Mety Ho Hazakazaka Mankany Amin’ny Fiainana Na Fahafatesana Ny Fandehanana Any Amin’ny Anjerimanontolon’i Paragoay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Marsa 2017 2:12 GMT
Vakio amin'ny teny русский, English, Français, Ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, Español
Mandeha any amin'ny Anjerimanontolo tsy miankina ao Vallemi i Christian Quiñónez sy i Éver Pereira ny Alatsinainy hatramin'ny Zoma. Tsy maintsy mitaingina sambokely miampita renirano izy ireo mba hahatongavana any. Sarin'i Nicolás Sáenz nalaina tao amin'ny tranonkalan'ny Kulutral, nahazoana alalana.
Ity lahatsoratra misy fizarana roa ity dia farany amin'ilay andiany Vacas que vuelan, escuelas que caen an'i Patricia Benítez ary navoaka voalohany tao amin'ny Kurtural.
Ny Alatsinainy hatramin'ny zoma i Christian Quiñónez, eo anelanelan'ny amin'ny fito ora sy amin'ny iray ora folakandro, manao ny asan'ny mpitantsoratra ao amin'ny tribonalin'i Puerto Casado [Ang] , tanàna izay avoakan'ny Google Maps ho La Victoria, anarana avy amin'i Carlos Casado del Alisal, Espaniola iray lasa tompon'ny tanim-bahoaka mirefy dimy tapitrisa hektara tamin'ny 1889: mihoatra kely ny velaran'i Costa Rica, Slovakia, Soisa na Belzika.
Tany amin'ireo tany manakaiky ny sisintany Breziliana i Casado no namorona ny orinasa voalohany fitrandrahana lotson-kodinkazo ao Amerika, ranonjavatra karohina noho ny fahafahany manova ny hoditry ny biby ho tonga lamba hoditra. Ao amin'ny hoditry ny quebracho, hazo hita any Amerika Atsimo, maniry amin'ny ampahany lehibe amin'ny faritra, izay natakalon'i Carlos Casado tamin'ny Paragoaiana sy ny mponina teratany, no ahitana ny loharanon'ity fanenjanana voa-janahary ity.
Nanampy betsaka tamin'ny fitomboan'i Puerto Casado tany am-piandohan'ny taonjato faha 20 ny fitrandrahana ny hazo quebracho. Na ny herinaratra aza dia tonga tany talohan'ny renivohitra, noho ilay rafitra mamelon-tena. Namelona ny afo izay mampangotraka ny rano ny tain-tsofan'ny quebracho voatorotoro ary nanome ny angovo ilaina amin'ny fampandehanana ny orinasa. Nozaraina ho an'ny trano fonenan'ireo mpiasa ambony, vahiny avy any Arzantina, Alemana, Hongria ary ny firenena hafa ny ambin'ny angovo mihoatra.
Niasa tao amin'ilay orinasa ny tanàna iray manontolo, na fara fahakeliny ny ankamaroany. Ireo tanora olona ambony tao dia Paragoaiana, ary na tsy nanana ny toeran'ny mpitondra aza, dia nanao ny asa fitantanana sy ny fitantanambola. Ahitana ireo mpiasa sy mpiasa tànana teratany avy amin'ny foko samy hafa, faritra hafa any Chaco mifandray amin'i Casado ny sokajy ambany. Toy izany no anehoan'i Valentina Bonifacio, vehivavy Italiana mpandinika momba ny vakoka, taorian'ny fikarohana ara-tantara nandritra ny taona maro nataony.
Mponina latsaka kelin'ny fito arivo no mipetraka ao Puerto Casado amin'izao fotoana izao, izay taranaky ny mpiasan'ilay orinasa taloha ny ankamaroany. Ny trano vita amin'ny rindrina fotsy misy zaridaina lehibe izay nilaozan'i Christian Quiñónez isanandro amin'ny telo ora tolakandro dia mijoro noho ireo andry vaventy sy vatan-kazo lehibe, izay hazo tena mafy ka mahatohitra famaky, izay nahazoany ny anarany : quebracho [mahatohitra].
Miara-mipetraka amin'ny fianakaviany izy, noho ny rainy sy ny lova miavosan'ireo tompon'ny toeram-pambolena lehibe. Fa tsy mba tahaka ny rainy, ilay mpanefy vy fahiny tao amin'ilay orinasa taloha, tsy nahalala ny fahombiazan'ny lotso i Christian, na ny lalamby namboarin'ilay orinasa tamin'ny 1927 nitaterana ireo bolabolankazo ho ao amin'ny orinasa.
Ny fandalovana eny amin'ny anjerimanontolo
Tsy misy intsony oniversitem-panjakana na tsy miankina any Puerto Casado. Izay no antony anantenàn'i Christian Quiñónez, mpiasam-panjakana ao amin'ny tribonalin'i Paz, mpianatra taona fahatelo ao amin'ny sampana lalàna, ny hahazo ny maripahaizany any an-dafin'ny renirano, any Vallemi, any amin'ny departemantan'i Concepción. Hatreto, ny Alatsinainy hatramin'ny Alakamisy dia niampita (ilay renirano) miaraka amin'ilay namany Éver Pereira, izay namany efa iray kilasy taminy ihany hatrany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa (lisea) izy. Niaraka nanatrika ny fanakatonana ny Anjerimanontolon'i Maria Serrana, Oniversite tsy miankina naorina tamin'ny 2009, izy roalahy. Fa ny fampiofanana azy ireo dia tsy miorina amin'ny fankatoavan'ny AERES paragoaiana (Aneaes), mpiantoka ny kalitao.
Raha azony natao ny nisafidy, dia ho nandeha tany amin'ny oniversitem-panjakana i Quiñónez. «Ny nofin'ireo te-hanana asa dia ny mandeha any amin'ny anjerimanontolo nasionalin'i Asunción », hoy izy. Fa araka ny traikefany, na dia te-hanao zavatra aza tsy afaka. Ny oniversitem-panjakana akaiky indrindra dia ny an'i Asunción, fa any avaratry ny tanàna no misy azy, eo amin'ny 200 kilometatra miala ny tanànany.
Voafetra ny tolotra ho an'ny fampianarana ambony avy amin'ny fanjakana any Paragoay. Ahitana oniversitem-panjakana fito, ahitana sampam-pianarana mizarazara any amin'ny tanàna hafa ny firenena -nefa misy oniversite tsy miankina fito amby efapolo misy sampana maro manerana ny firenena. Amin'ny ankapobeny dia tsy afaka mianatra amin'ny oniversitem-panjakana noho ny antony samy hafa ny ankamaroan'ny mponina. Lafo ny saran'ny fisoratana anarana, manahirana ny oran'ny taranja sasany ary tsy ahafahana manao asa miaraka amin'ny fianarana, adidy ho an ‘ireo izay tsy manana fahafahana hamatsiana vola fianarany.
Andoavan'i Christian Quiñonez 1 dolara ny fampandehanana ny sambony. Raha tsy izany, afaka mandeha amin'ny zahatry ny orinasa tsy miankina iray izy, izay andoavany avo 15 heny mihoatra ny fitaterambahoakan'i Asunción. Sary an'i Nicolás Sáenz, nalaina tao amin'ny tranonkalan'ny Kurtural, nahazoana alalana.
Andro iray namirapiratra, tsy nisy rahona na rivotra no nitranga ny olana. Maharitra teo amin'ny ora iray sy sasany ny dia mankany Vallemí. Na eo aza ny toetrandro tsara, ny fihaonam-ben'ny ony Paragoay, Apa sy ireo havoana tsara tarehy izay mamaritra ireo lalana, dia tsy fitsangantsanganana am-pilaminana mandrakariva. Mamela ireo mpandeha hanirery eo am-pandinihana ny tontolo iainana voajanahary ny feo mankarenin'ny maoteran'ny sambo, tena mahavariana ho an'ireo sambany mahita izany voalohany, fa tonga mankalao rehefa lasa fahazarana. “Mipetraka izahay ary tovasy (endrika matotra) jagua canóaisha (toy ny alika eny ambony lakana), mikarenjy hatrany Vallemí izahay ” hoy Christian mivazivazy amin'ny fiteny guarani.
Éver Pereira, izay manomana ny maripahaizana lisansa amin'ny fitantanam-bola, dia efa tia ny taranja kajy hatramin'izay. Raim-pianakaviana manana zanaka kely roa izy ary miasa any an’ ala ihany koa manapaka hazo izay avadiny ho taratasy. Asa mamizana tokoa izany ataony any anaty ala izany. Tao amin'io birao ankalamanjàna izay tiany tokoa io, indray andro tamin'ny 2015, no nahatapaka ny heviny hiverinahanohy ny fianarany indray.
Hatramin'ny alarobia 8 jona lasa teo, tsy mbola rendrika mihitsy i Christian Quiñónez sy i Éver Pereira. Tamin'io andro io, tsy nitsoka na avy any avaratra na avy any atsimo ny rivotra, fa tena nangatsiaka be ny andro. Toy ny fanaon'izy ireo mahazatra hatramin'ny volana martsa, niampita ny renirano ho any amin'ny oniversite i Quiñónez, Pereira, sy ilay rahalahiny 19 taona, Luis izay miara-mianatra amin'izy ireo ihany koa. Tamin'ity indray mitoraka ity, niaraka tamin'i Ramón Paredes sy ny zanany lahy Blásido, mpiara-monina izay nila niampita hatrany Vallemí mba hividy kojakoja fanolo ho an'ny môtô. Tsy vao sambany niara-dia tamin'izy ireo i Paredes, mpahay mekanika. Tsy nisy nieritreritra izay hitranga.
Tamin'iny tolakandro mangatsiakan'ny faran'ny lohataona iny, tsy nisy olana ny dia nandroso. Fa ny fiverenana kosa dia nampahatahotra, angamba noho ny vesatra fanampiny naterak'ireo kojakoja fanolo. Roapolo minitra taorian'ny fiondranana, nikoropaka ireo mpiasan'ny sambo. Nanodidina ny tamin'ny folo ora alina raha nanomboka nilentika teny amin'ny 6 km miala ny seranan'i Vallemí ilay sambokely. Niaraka tamin'ny jiro fitsilo tokana, niezaka namoaka izay tao anaty sambo izay niha-feno rano hatrany ireo tantsambo dimy nefa tsy nisy vokany. Tsy nahomby ihany koa ilay andrana fitodiana natoron'ny olona iray izay tsy tadidin'i Christian intsony, nisy feo iray nihiaka tamim-pahakiviana. Vokatry ny motera izay feno rano tanteraka, ny hany vahaolana dia ny nitsambikina avy any anaty sambo tao anaty haizina. Tsy nisy nanana fingotra aro-aina izy ireo.
«Nitsambikina aho na dia tsy nahita na inona na inona aza. Nanandrana nilomano aho, nifikitra taminà voahirana ary nanomboka nipoitra», hoy i Quiñónez nahatsiaro tamin'alahelo. Tsy nahatratra ny tanin'i Vallemí na ny an'i Puerto Casado ilay sambo. Teo amin'ny nosy kely eo anelanelan'ireo tany roa ireo izy. Tonga teny koa ry Pereira mirahalahy, zanaky ny mpanjono sady mpilomano mahay. Fa tsy nisy nahita an'i Ramón sy i Blásido Paredes
Niantso azy ireo i Quiñónez sy ry Pereira mirahalahy sady nikiakiaka nandritra ny minitra vitsy, fa tsy nisy namaly. Kotsa tanteraka ary ambivitra ny ho tratry ny fidinan'ny hafanana, nitady lalana tao amin'ilay nosy izy ireo nitady fanampiana, ary fotoana fohy avy eo dia nahita vondrona mpanjono izay nanampy azy ireo hitady ny namany. Hita ihany ora maromaro taty oriana ny vatan'i Blásido Paredes efa tsy mihetsika intsony. Ny an'ny rainy kosa nipoitra telo andro taty aoriana taorian'ny fikarohana nataon'ny tafika.
« Fantatray fa mety hitranga izany, fa tsy noeritreretinay ho tena ho mafy be toy izany. Na nisy aza izany loza nanambana izany, dia nandeha sambo foana izahay isanandro. Efa mampidi-doza ny any anaty rano, fa na ny fiainana ihany koa aza, fanampiny fotsiny ny rano, izay ihany », hoy i Quiñónez nieritreritra ny loza izay namono ny namany roa lahy. Fa tsy vao sambany ny fianarana no nitondra ho aminà loza mahatsiravina .
Handinika akaiky kokoa ireo olana sy fanamby atrehin'i Quiñónez sy ireo hafa mpirotsaka ho amin'ny fikatsahana ny fianarana ambony ny tapany faharoa amin'ity fandihadiana ity.